Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 29, 2019 12: 00 No Comments
Maalintii reer Guinea ay soo celiyeen "Maya" weyn oo ku qornaa xarafyada waaweyn, "Hal" geesinimo, taariikhi ah iyo waddaniyiin ku saleeyay milkiilayaasha iyo gawracayaasha aan toobad keenin. Waad ku mahadsan tahay xad ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 29, 2019 1: 00 No Comments
Calanka caamka ah waa la aqbalayaa, labada hoggaamiye ayaa go'aansada in ay isudheelaan difaacooda, siyaasadaha dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda. Waxay ugu baaqayaan dhammaan Afrikaanka in ay ku biiraan Midowga, ... Akhri wax dheeraad ah
Guinea: is casilaada Sidya Touré, Wakiilka Sare ee Madaxa Dowlada
Posted By: Admi2waa: Diisambar 11, 2018 11: 48 No Comments
Wakiilka Sare ee Wadanka Guinea ayaa is casilay. Ku dhawaaqista maanta waxaa sameeyay Sidya Touré laftiisa: "Dalkeena waxaa wajahaya dhibaatooyin badan ... Akhri wax dheeraad ah
Nin Faransiis ah oo aan laheyn Conakry: Waxaan dareemayaa sida boqor, gabdhuhu way i jiidayaan, qof kastana waxa uu iigu yeedhaa aniga "Waa maxay sababta dib ugu laabtay Faransiiska? "
Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 5, 2018 12: 00 No Comments
Waa tan sheekada yaabka leh ee nin guri laawayaasha ah oo ku wareegayay waddooyinka Bordeaux: fursadda isaga lagu ogaanayo Afrika waxaa lagu soo bandhigay ganacsade. Its ... Akhri wax dheeraad ah
Samory Touré ee magaalada St-Louis ee dalka Senegal intii lagu jiray musaafurinta: Sawirkan wuxuu muujinayaa imaatinka Almamy Samory Touré ee magaalada St-Louis bishii Janaayo 4, 1899, wax yar ka dib markii la xiray, halkaas oo Samory lagu xirey waqti ka hor tarxiilkiisa. ciidanka faransiiska
Posted By: KongoLisolowaa: July 31, 2018 8: 48 No Comments
Halyeeyga ka mid ah sawirkaan ayaa sidoo kale khalad ah tan iyo markii uu muujinayo in goobta uu ku yaal Dakar. Si aan u caddeeyo inaan isku dayey inaan ogaado meesha sawir laga qaaday? Akhri wax dheeraad ah
Duqa madow ee Paris 1879, waxa laga tirtirey kaydadka iyo taariikhda: Severiano de Hérédia, duqa “Black” ee Paris, kuxigeenka, wasiirka howlaha guud “Kaariibiyaan Madow madow, Severiano de Heredia, wuxuu ahaa wasiirka howlaha guud. iyo madaxweynaha golaha Paris ee Jamhuuriyadda 3aad "
Gawaarida gaashaaman ayaa lumiya tikidhada wadada weyn!
Enyembe iyo Ogbrou waa ereyo xaqiiq ah oo xaqiiqda u taagan laba luqadood oo kala duwan oo luqadda lagu hadlo ee waddanka lagu magacaabo Abidji
Diimaha: Magaca cusub ee Ibliiska "Dadkani waxay ku khiyaaneeyaan, ka soo baxa diimahooda; diimahaan ka dambeeya »Islaamka, Kaniisadnimada, Protestantism, Pentecostalism, Judaism, Buddhism, Ortodox, Etc
Gumeysiga sawirka "Ilaah": Dambiga ugu xun ee gumeysiga ayaa laga yaabaa inuusan ahayn khiyaanayn taariikhda taariikhdeena, been abuur ah in Diop ay ku adkaysatay in ay saxdo; laakiin, sida John Henry Clarke uu soo jeediyay, "Gumeysiga sawirka Ilaah"
Feb16 09: 08